Iiseti ezili-16 zeBistro eziBalaseleyo zokuThenga ngoku- Iseti yeBistro yeGadi - Thenga Ngoku
Iiseti ezili-16 zeBistro eziBalaseleyo zokuThenga ngoku- Iseti yeBistro yeGadi
Cox kunye neCox
Iiseti zeBistro zilungile ekudleni i-alfresco kwiinyanga zasehlotyeni. Nokuba unayo ibhalkhoni , ithala, igadi encinci okanye ipatio, kukho isitayile esininzi esinee-bistro zokulondoloza indawo ukuze zilungele yonke indawo engaphandle.
Itafile ye-bistro kunye nezitulo ezibekiweyo ziya kuhlala zibabini izitulo netafile , ihlala isongelwa okanye ibambeka, kwaye ihlala ilula ukuyigcina.
Kodwa yeyiphi i-bistro yangaphandle ebekelwe wena? Nokuba ujonga iseti ye-bistro yentsimbi elula eyongeza umbala, iseti ye-chic ye-rattan bistro ebotshelelwe kunye neyakho igadi Ukuhonjiswa, itafile enesitayile sebha kunye nezitulo ezibekiweyo, okanye mhlawumbi iseti yemosisi ebhalwe ngaphezulu ukongeza umtsalane kwigadi yakho, siqokelele ezinye zezona zilungileyo ukukunceda ukuba udle kwaye uphumle kwisitayile. Siye saphosa isitulo sokugungqa i-bistro ebekwe kumxube!
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi1Ilungele izithuba ezincinci-iBistro SetIcwecwe le-2-Seater Garden ye-Bistro Itafile kunye nezihlalo ezibekwe, eziGreen yingcube.com UJohn Lewis yingcube.comI- £ 249.00 THENGA NGOKU
Wahlala emajukujukwini? Le tafile ye-bistro enezihlalo ezibini kunye nezitulo zilungele ibhalkhoni encinci okanye ithala. Cofa nje izitulo ngaphantsi wakuba ugqibile ukugcina indawo yakho icocekile.
FUNDA NGOKUGQITHISILEYO : I-14 yeetafile zangaphandle ezinesitayile zokuthenga igadi yakho
MbiniEyona seti ye-bistro iphefumlelweyo yeholide- iBistro SetIgadi yeGear Leon String Bistro Set thompson-morgan.com thompson kunye morgan thompson-morgan.comI- £ 169.99 THENGA NGOKU
Hlaziya isitayile kunye noThompson kunye noMorgan's bistro set set. Izitulo zikhuthazwe yifenitshala yaseMexico yowe-1950 kwaye ijolise ekukhululekeni kangangoko.
3Iseti yomthi-iBistro SetUJohn Lewis kunye namaQabane eTuck 2-Seater Garden yokutya itafile kunye nezihlalo ezibekwe, i-FSC-eqinisekisiweyo (i-Acacia Wood), yendalo UJohn Lewis kunye namaQabane UYohane yingcube.comI- £ 499.00 THENGA NGOKU
Zenziwe zenziwe ngomthi womnga womthi we-FSC oqinisekisiweyo, le seti ye-bistro yokutyela yenziwe ukuze izitulo ezibini zityhaleke phantsi kwetafile. Indlela ekrelekrele yokonga endaweni!
4Eyona bar ibistro iseti- iBistro SetvidaXL 3 Piece Bistro Set I-Acacia Wood eqinileyo vidaXL vidaxl.co.ukI- £ 208.99 THENGA NGOKU
Iseti ye-bar bistro yangaphandle ilungele ukonwabela iziselo kunye nokulunywa ngokukhawuleza ukuba utye. Ngokwakhiwa kweenkuni zomthi ezikumgangatho ophezulu kunye nokugqitywa kweoyile yendalo, le seti yomeleleyo yebar iyanqanda imozulu kwaye kulula ukuyicoca. Itafile yetafile ine-parasol hole ukuba ufuna umthunzi xa kuphuma ilanga.
5Uyilo oluncinci-iBistro Set2 Isihlalo Igadi Aperitif Set, Ngwevu IMADE.COM yenziwe made.comI- £ 229.00 THENGA NGOKU
Izitiya yindawo yokubalekela, ke kubalulekile ukuba sizenze simeme kangangoko sinako. Siyayithanda le bistro ekumgangatho we-set eyenziwe kwi-MADE, enoyilo oluncinci lokubeka nakweyiphi na indawo. Zilungile kwiziselo zangokuhlwa.
6Uhlobo olufikelelekayo-iBistro SetIPorto Bistro Lounge Iseti zeknde.co.uk wwengekndine.co.ukI- £ 79.00 THENGA NGOKU
Isitayile kwaye siyasebenza, le seti ye-bistro lounge yomelele, inqabile kwimozulu kwaye inokugoqwa ukuze igcinwe lula. Ukufezekisa ukuphumla elangeni.
7Eyona bistro isetelwe ibhalkhoni- iBistro SetIndawo yokuhlala yeBalcony Bistro Argus Ikhaya leArgos xangxang.co.uk£ 36.00 THENGA NGOKU
Siyayithanda le bistro yokonga indawo yeebhalkhoni, ezilungele thina kuthi abahlala esixekweni. Zombini itafile kunye nezitulo zisongelwe ngokulula, ke awuzukuba nexhala malunga nokuthatha indawo eninzi.
yintoni ehamba nemfusa
8Eyona bistro isetelwe usapho- iBistro SetIseti yeBistro eyi-4 Argus Ikhaya leArgos xangxang.co.ukI- £ 250.00 THENGA NGOKU
Le seti ye-Scandi-bistro iseti ibandakanya izitulo ezibini kunye nebhentshi enezihlalo ezibini, ke ilungele lonke usapho ukuba luphume. Siyayithanda i-slate grey design, egcwalisa yonke indawo yepatio.
FUNDA NGOKUGQITHISILEYO : Ezona ndawo zilungele ukuhlala elangeni zizisa ichibi elingaselunxwemeni kwigadi yakho
9Kulula ukucoca iseti ye-bistro-Iseti yeBistrovidaXL 3 Piece Folding Bistro SetiPlastiki eluhlaza vidaXL vidaxl.co.uk£ 87.99 THENGA NGOKU
Yenziwe ngeplastiki yomelele, le seti ye-bistro iyamelana nemozulu kwaye kulula ukuyicoca nayo. Itafile kunye nezitulo zinokusongwa kwaye zigcinwe xa zingasetyenziswa.
10Eyona seti yeBistro isongekayo- Iseti yeBistroU-Eva 2 weSihlalo seBar Bistro Set-Sage Argus Ikhaya leArgos xangxang.co.ukI- £ 60.00 THENGA NGOKU
Ngaba ujonge iseti yebar bistro? Esi sihlalo si-2 sisuka eArgos sisabelo esikhulu sokuthenga. I-Slimline kwaye yenziwe ngentsimbi eyomeleleyo, itafile ephezulu kunye nezitulo zigoba ngokulula nangokulula ukuze zigcinwe.
Shumi elinanyeIseti ye-bistro yentsimbi-iseti yeBistroI-Amsterdam 2 Seater Metal Bistro Set dunelm.com dunelm.comI- £ 69.00 THENGA NGOKU
Yigcine ilula ngale seti yesitayile bistro, ilungele nayiphi na igadi yesayizi. Yenziwe ngesakhelo sensimbi engasindi, esi seti somelele kwaye sinokugoqwa ukuze sigcinwe ngokulula.
12Iseti ye-bistro eluhlaza eluhlaza-Iseti yeBistroIndawo ekuhlwayelwa kuyo indawo yokuhlala 2 iBistro Setha-Luhlaza indawo yokuhlala.co.uk indawo yokuhlala.co.ukI- £ 150.00 THENGA NGOKU
Elula kodwa inesitayile, siyayithanda ishishini le-chic yezihlalo ezibini zokutyela iBistro. Uyilwe ngesinyithi esomeleleyo esinesinyithi kulula ukuseta kwaye usonge kude ekupheleni kosuku.
13Iseti yeBistro efanelekileyo-Iseti yeBistroIseti yeSantorini Bistro Lounge wwengekndine.co.uk wwengekndine.co.ukI- £ 449.00 THENGA NGOKU
Ukubonelela ngentuthuzelo kunye nesitayile, le ndawo yokuphumla emnyama emnyama yindawo yokuhlala efanelekileyo. Iza kunye netafile yekofu efanayo kwaye yomelele kwaye imelana nemozulu.
FUNDA NGOKUGQITHISILEYO : Iziqwenga zefanitshala eziyi-17 zefanitshala zezona ndawo zincinci
14Iseti yomthi-iBistro SetIseti yeRavenna Bistro coxandcox.co.uk coxandcox.co.uk£ 325.00 THENGA NGOKU
Ilungele izidlo ezisondeleyo, esi seti somthi sigqibile ukuhlanjwa kunye noyilo oluhle oluhle.
Shumi elinantlanuI-bistro yangaphakathi / yangaphandle iseti- iBistro SetIpakethi yeZitulo ezitsha zeAcapulco (x2) kunye neTafile (x1) SKLUM sklum.comI-US $ 169.95 THENGA NGOKU
Ifumaneka kuluhlu lwemibala eqaqambileyo kunye nesakhiwo sensimbi, le seti ye-bistro idibanisa uyilo kunye nentuthuzelo kwaye inokusetyenziswa ngaphandle. Gcina ngokukhuselekileyo ebusika.
16Kulula ukuyigcina-iBistro SetIseti yeGreenhurst Raffles Bistro-yeNdalo wwmzi.co.uk wwmzi.co.ukI- £ 139.99 THENGA NGOKU
Yenziwe nge-Acacia eqinileyo, le bistro yokhuni oluqinileyo egudileyo ilungile ukuba ulandela isitayile sakudala. Kulula ukuyigcina, inetafile yokusonga engqukuva enezitulo ezimbini zokusonga.
Iiprojekthi zokuhombisa ikhaya
Eyona ndawo yokugcina umthi wekrisimesi